Rajery: “Vadin’asa sy fialam-boly ny mozika eto” | NewsMada
Rajery: “Vadin’asa sy fialam-boly ny mozika eto”
Vahinin’ny fandaharana « Ambarao », tao amin’ny onjam-peo Alliance92, ny alarobia teo, Rajery. Marobe ny hevitra nentiny sy ny hafatra nampitainy. Nisongadina tamin’izany ny nilazany fa tokony hitondra hafatra sy hanabe ny mozika, izay asa toy ny asa rehetra, saingy vadin’asa sy fialam-boly eto amintsika.
27 taona izao no nahafantarana an-dRajery, tsy zovina intsony amin’ny fitendrena valiha, eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, raha toa ka efa 38 taona ny nitendry valiha. Nambarany fa fifaliana lehibe ho azy ny nahafahany nampahafantatra ny valiha sy i Madagasikara, nandritra izay fotoana maro izay.
« Ireo (ny valiha sy i Madagasikara) aloha no fantatry ny olona fa ny anarako, any afara. Tombom-barotrabe izany. Tsy izaho irery koa anefa no nitondra ny valiha, tany ivelany tany… Nahafahanay niresaka ny momba an’i Madagasikara izay fotoana lavabe izay. Marihiko fa izaho, tsy milaza zavatra ratsy momba an’i Madagasikara mihitsy, any ivelany any, fa ny hareny sy ny hakantony ary ny zavakantony no ambarako”, hoy izy.
Anisan’ny antony nahazoany izany fahombiazana lehibe izany ny fahaizany mikaroka. “Ny “Afindrafindrao” sy “Izahay sy malala” ireo no tsy maintsy hain’ny mpitendry, tamin’ny fotoana nanombohako. Kanefa nieritreritra aho hoe nahoana no tsy maintsy ireo foana, kanefa misy hafa, avy any amin’ny faritra? Nanomboka teo, nihataka ny rafitra sy nikaroka fomba fitendry avy any amin’ny sisiny aho”, hoy Rajery. Niketrika ny fitendrena “piano” sy gitara amin’ny valiha ihany koa ity mpanakanto ity. Izany rehetra izany no namaritra ny mampiavaka azy.
Tsy masina an-taniny…
Manana ny lazany Rajery, any ivelany any, ary zara raha mijanona eto an-tanindrazana izy, mandritra ny taona iray, noho ny fahamaroan’ny sehatra iantsoana azy. “Rehefa hitan’ny olona fa kanto ny ataonao, voaantso foana ianao. Ny tsara, itan’ny olona foana”, hoy izy. Eto amintsika kosa, toa tsy mahita fahombiazana loatra ny karazana mozika, toy ny entin-dry Rajery. “Tsy mahagaga izany, satria izay ny vokatry ny fanjanahana ara-kolontsaina. Nahamaika antsika kokoa ny fahafantarana ny an’ny vahiny sy ny filolohavana izany, tsy ratsy izany kanefa mila fantarina aloha ny an’ny tena”, hoy ny valin-tenin-dRajery.
Mikasika izay indrindra, zava-dehibe ho an’ireo miroso amin’ny tontolon’ny mozika ny fahafantarana ny hoe kolontsaina, kolo olona manam-panahy mba hanana fahendrena. Zava-dehibe ho azy koa ny fahafantarana ny tontolon’ny asa mahakasika ny mozika, araka ny voalazan-dRajery hatrany. Tsy misy loatra anefa izany.
Vokany, “raha tokony ho asa toy ny asa rehetra ny fanaovana mozika, mijanona ho vadin’asa sy fialam-boly izany, eto amintsika. Hihazakazahana ny gadon-kira malaza, rehefa misy iray malaza amin’iny, manaraka daholo…”, hoy hatrany Rajery.